Xiaomi na-ebupụta ihe nkpuchi mmetọ na-adịghị ọcha na China | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị lelee katalọgụ nke ụlọ ọrụ China anyị nwere ike ịchọta ezigbo ihe ijuanya na nke ahụ bụ na Xiaomi na-emetụ ngwaahịa niile ọ nwere ike na ndị ọzọ. O zughi iji tinye ọnụ ọgụgụ dị egwu nke ekwentị na ahịa, oriọna oriọna, ndị na-ehicha ọkụ, plọg na ngwaọrụ ndị ọzọ, na ugbu a ụlọ ọrụ ahụ amalitela mkpuchi mgbochi mmetọ na China. Eziokwu bụ na nke a bụ ihe mgbagwoju anya maka mba ahụ ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu mmetọ, yabụ ihe nkpuchi a nwere ike ịbụ onye kacha ere ahịa n'ime na ikekwe na mpụga mba ahụ.
Ọrụ nkpuchi ahụ abụghị ihe ọzọ karịa ikpocha ikuku nke a na-eku ume n'obodo ndị a na-ebu mmetọ, na nke a Xiaomi na-egosi na nkpuchi ahụ dị ọcha, nke a na-akpọ ya, ọ ga-eme ka ọ dị ọcha na ikuku ruo 99% ekele maka nanofilters ndị agbakwunyere na ya, na-ewepụ kpamkpam ma na-agbanye ọkụ. N'aka nke ọzọ, akwa ya bụ polyester ma na-agbakwunye ezigbo onye nwere ezi uche ma nwee uche na ogo ọsọ ọsọ 3, nke chọrọ batrị lithium yana dịka Xiaomi si ewe ihe dị ka awa 3-4 iji kwụọ ụgwọ iji ya.
N'okwu a ọnụahịa nke ihe nkpuchi nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ maka ọtụtụ ndị na-eji ndị a iji chebe onwe ha pụọ ​​na ofufe, nwere uru nke dollar 13. N'ezie, ihe nkpuchi na China ma ọ bụ ọbụna n'ebe ụfọdụ n'India dị mwute ikwu na ọ na-aghọ ihe dị mkpa, dịka anyị hụworo n'oge a na ụfọdụ mgbasa ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi na-ebuputa nkpuchi mmetọ a na-adịghị ọcha na China